Baqikelela ukuhlanzeka kwemvelo | News24
Baqikelela ukuhlanzeka kwemvelo
OWESIMAME wase-Hillcrest uNks Tracy Mbhele waseShongweni osebenzela eKloof okhathazekile ngendawo eyenile enotshani nokhula esentshenziswa ngabagibeli uma beya esitobini sama tekisi eKloof.
UNks Mbhele ubikele umqashi wakhe ukuthi kunzima ukudlula kule ndawo eku-M13.
Uthe:“Ngivamise ukunqamula kule ndlela eku-M13 ukuze ngifike ngokushesha esitobhini . Yize le ndawo be jwayele ukuyibhusha utshani, kodwa isibukeka kabi njengoba inokhula notshani eduze kwalapho esinqamula khona ngase nxanxatheleni yezitolo iVillage Shopping Centre. Bese kunzima ukuhamba kuyona uma sidinga ukuya esitoboni sebhasi,” kusho yena.
UNkk Mbhele uthe emva kokuba ebikele umqashi wakhe ngalesi simo ube esexhumana nabakwa-Kloof Conservancy.
Okhulumela abe-Kloof Conservancy uMnuz Hugh McGibbon uthe: I-Kloof Conservancy ine-project ebhekelela ukukhulisa isikhwama esilekelela amabhodi ezikhangiso emgwaqeni u-M13.
Imali abayithola kulesi sikhwama ikhokhela ikontileka ibhekelela ukugunda utshani nokhula, eyaziwa ngokuthi yiMsenge Environmental Landscapes. Umnikazi wale kontileka, uMnuz Simon Maphumulo uqinisekise ukuthi le ndawo eku-M13 izohlezi ibhushiwe ukuze umphakathi ukwazi ukuhamba kuwo ngokukhululeka.
Uthe lokhu uzokwenza mahhala njengoba benesivumelwano ne-Kloof Conservancy ukuthi umgwaqo u-M13 kumele uhlale ubukeka ungabi notshani nokhula.